HYDROPONICS: WAX KU BARANAYA NUUCYADA YAANYADA SII KORDHAYA - BEER CAGAARAN
Hydroponics waa tiknoolaji ah oo dhirta la koray iyada oo aan la isticmaalin ciidda. Nafaqada xididada waxay ku dhacdaa jawi dabiici ah. Waxay noqon kartaa hawo qoyan labadaba, biyo aad u culus, iyo mid adag (muuqaal, qoyaan iyo hawo qaadasho). Iyada oo habkan loo baahan yahay waraabin joogto ah ama joogto ah oo la isticmaalayo xal ka shaqeynaya cusbada macdanta, ka kooban kuwaas oo ku xidhan baahida warshad gaar ah. Maanta waxaannu ka hadli doonaa sidii loo kori lahaa yaanyada korontada.
Koraaya yaanyada koriinka ah
Tamaandhadu waa dalag aan qallafsanayn oo dad badani jecel yihiin oo jeclaan lahaa inay arkaan miiskooda sanadka oo dhan. Khudradda cagaarka ah ayaa la og yahay inay labadaba caafimaad iyo caafimaad qabaan labadaba. Laakiin qof walbaa ma laha wax qorshe ah, iyo xitaa mulkiilayaasha faraxsan ma awoodi doonaan in ay soo goosataan xilli kasta. Thanks to hydroponics, tani waxa ay noqotey mid dhab ah labada aqalka dhirta lagu koriyo iyo guriga. Yaanyada sii kordhaya ee geedka farsamooyinka waa arrin, inkasta oo aysan ahayn mid fudud, laakiin waa mid xiiso leh iyo xitaa hannaanka hidaha ah.
Ma taqaanaa? Ereyga "hidroponics" ayaa waxaa soo saaray Dr. William F. Gerick. Waxa kale oo loo tixgelinayaa aasaasaha hidde-dhiska casriga ah, kuwaas oo u wareejiyay habkan dhirta sii kordhaya sheybaarka ilaa warshadaha.
In yaanyada, nidaamka xidid waa mid aad u muuqda, taas oo ah tayada wanaagsan ee habkan of beerashada. Inta badan, marka ay kobcinayaan yaanyada habka hiddo-dheelan ee qadar yar, guriga dhexdiisa, waxaa loo malaynayaa in lagu dabaqo habka lagu sameeyay 60-kii qarnigii la soo dhaafay. Waxaa loo isticmaalaa substrateka la dhaqay iyo jeermisyada loo isticmaalo (dhagxan la jajabiyey iyo jeex jajab oo ah jajab yar oo ah 3-8 mm, jeexjeex, xoqan, ciid adag, dhoobo ballaaran, dhogor macaadin, jajabyo qumbaha). Waxay ka buuxsanyihiin dheriyo yar yar (10-12 cm), taas oo, marka loo eego, waxaa lagu meeleeyaa weelal waaweyn oo lagu buuxiyo xal gaar ah oo loogu talagalay hidde-yaqaanada (kaas oo lagu diyaarin karo gacmahaaga ama iibsanaya alaabo dhamaystiran). Heerkulka maalmaha qoraxda waa in lagu hayaa + 22 ... + 24 S, maalmaha daruuraha - + 19 ... + 20 S, habeenkii - aan ka yarayn + 16 ... + 176 S. Waqtiga fruiting waxaa kordhay 4 S, heerkul hoose kala duwan + 18 ... + 20 ° C.
Waa muhiim! Marka heerkulku hoos u dhaco + 156 S, nidaamka xididka ayaa la keydiyaa, taas oo keeneysa hoos u dhac ku yimaada kobaca iyo hoos u dhaca wax soo saarka beeraha. Haddii hawadu kor u kacdo + 32 ° S, markaa hawadu waxay noqotaa mid nadiif ah, ubaxuna hoos ayey u dhici doonaan.
Koritaanka nidaamka xididka ee yaanyada waa in la xakameeyaa. Tani, dheriyada yar yar waa in laga saaro waqti ka waqti. Marka xididdada geedka ku dhex maraan daloolka hoose, hoos u dhig qiyaasta nidaamka dhuumaha biyaha ee heerkan oo ah in hawada u dhexeysa 4-8 cm loo sameeyo, habkani wuxuu si wanaagsan u saameeyaa koritaanka labada qaybood ee warshadda iyo nidaamka xididka. Xalka nafaqada ayaa ah qaybta ugu weyn ee koritaanka yaanyada oo keliya, laakiin sidoo kale dalagyada kale, habka hidroponics. Waxaad ka iibsan kartaa dukaanka khaaska ah, ama adigu u diyaar garo, maaddaama ay fududahay in xal loo helo hidaha. Waxaad isticmaali kartaa Bacriminta kala duwan ee adag, iyaga oo ku daraya hadba sida loogu baahan yahay. Qulqulku waa inuu ku jiraa inta u dhaxeysa 6.0-6.3 pH.
Ma taqaanaa? Nidaamyada Hydroponic waxaa loo qaybin karaa 2 nooc oo waaweyn: "Active" (oo loo baahan yahay in lagu dhex maraayo bambooyin) iyo "Baaskiil" (ama dhoobo, aan lahayn farsamo).
Xulashada noocyo ah beerashada
First of dhan, waxaa lagama maarmaan ah si loo ogaado nooca yaanyada aad rabto in aad koraan. Inkasta, aragti ahaan, noocyo kasta oo yaanyo ah ayaa ku habboon beerashada hidroponic, laakiin waxaad helaysaa wax-soosaarkooda sare iyadoo la dooranayo noocyo gaar ah oo lagu koriyo ah. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la doorto yaanyada bislaado ee hore u bislaaday.
Gavrosh. Uma baahnid garee iyo pasynkovanii. Fasalku wuxuu u adkaystaa dabeecad. Cunto miro, oo leh dhadhan macaan, gaaro 50 g Marka laga bilaabo biqilka si fruiting ee hydroponics qaadataa 45-60 maalmood.
Saaxiib F1. Kala duwanaansho sare (3.5-4 kg halkii geedka). Dhawaan ayey saameeyeen fayrasyada iyo cudurada. Laga soo bilaabo biqilka si fruiting qaadataa 55-70 maalmood.
Alaska. Wakhtiga isku midka ah ee Bisaylkiisa sida kala duwan ee hore. Loo kobciyo iyada oo aan la sameynin baadiyaha. Cuntada waa 3-3.5 kg geedka.
Bon Apeti. Kala duwanaanta yaryar ee yaanyada. Wuxuu u baahan yahay garaf. Miraha waa weyn - 80-100 garaam. Wax-soo-saarku waa mid sare - 5 kg oo baadiyaha ah. Nooc u adkeysiga fayraska iyo cudurada.
Sidoo kale hirgelinta guryaha, khabiirada waxay ku talinayaan yaanyo yaanyo ah (casaan), Blitz, Geronimo, Iskeelka, Quest, Tradiro (casaan), Noocyo Trust.
Waxa aad u baahan tahay si aad u kobciso yaanyada korontada
Hagaajinta, waxaa lagama maarmaan ah in la helo dheriyo dhirta, taas oo horay loo soo sheegey (yaryar gudaha iyo debedda weyn). Taangiyada gudaha waxaa ku habboon in lagu rakibo muujinta heerka dareeraha. Sidoo kale waxay u baahan yihiin substrate-ka lagu doorto ikhtiyaarkaaga. Tan iyo maaddada nafaqada ee xalka ah yaanyo hidropone ah waxaa lagu cabbiraa awooda wax qabad ee korantada, waxaad u baahan doontaa tilmaame koronto koronto.
Waa muhiim! Nidaamka nafaqada waa inuu ku jiraa 1.5-3.0 mS (unugyada wax-qabadka). Tilmaamahan waa in la ilaaliyaa maalin kasta. Muddo ka dib, heerka dareenka ayaa bilaabi doona inuu dhaco, iyo marka ay ka baxdo xeerarka la oggol yahay, xalka ayaa la bedelayaa ama dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah lagu daro. Xalka waa in la beddelo 1 mar 3-4 asbuuc.
Haddii aad xiiseyneyso su'aasha ah sida loo diyaariyo xalka loogu talagalay rakibidda dhuumaha, sidaa daraadeed habkani wuxuu faa'iido u leeyahay qiimaha nafaqada marka loo eego ciidda, kadibna waxaanu xusuusneynaa muhiimada saxda ah ee diyaarinta qalabkaas. Dhammaan walxaha dhammaan macdanta muhiimka ah waa in la isticmaalo. Isku dar aan haboonayn ayaa si aad ah u waxyeeleyn kara oo xitaa dhirta dhirta. Sidoo kale ogsoonow in marxaladaha kala duwan ee koritaanka yaanyada, cuntooyinka loogu talagalay xalalka hidroponic waxoogaa kala duwan. Sida aan aragno, waxaa lagama maarmaan ah in la iibsado xal diyaar ah, ama dhammaan qaybaha muhiimka u ah.
Arrin aad u muhiim ah waa xoojinta caddaynta. Yaanyada waxay u baahan yihiin iftiin badan. Guriga, nalalka dhaadheer ama ultraviolet ayaa ku habboon. Bilowga xilli sii kordhaya, dhirta waxay u baahan yihiin illaa 20 saacadood oo ah iftiin xoog leh, iyo inta lagu jiro muddada fruiting - ilaa 17 saacadood. Halbeegga waxyaabaha muhiimka ah ee yaanyada lafdhabarta ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah nidaamka laftiisa. Waxay noqon kartaa farsamada dhererka nafaqada, faleebo ama daadad go'an.
Ma taqaanaa? Dhawaan, warshad dhaadheer oo cusub oo aad u xiiso badan ayaa soo baxday taasoo si degdeg ah u sii socota. Waxaa loo isticmaalaa naqshadda gudaha, qurxinta godadka iyo saqafyada. Sidaas dhirta ma aha oo kaliya qurxin, laakiin sidoo kale u shaqeeya sida rinjiga, soo saartaa carbon dioxide iyo daahirin jawiga.
Tiknoolajiyada sii kordhaysa ee yaanyada yaryar
Si aad u korto tamaandhada koritaanka guriga, waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerarka qaarkood. Oo waxaa haboon in la bilaabo abuur abuurka ah ee geedo.
Sida loo koro geedo
Ku qooji miraha 1% xal kariimka ah 15-20 daqiiqo ka hor beerashada. Ka dibna si fiican u raaci. Fiisooyinka Fikrado badani waxay kugula talinayaan isticmaalka quraarad gaar ah u beerashada miraha kala duwan. Toddobaad ka dib, dhejisyada ayaa loo dhigaa dhinacyada si ay u xoojiyaan afkoda iyo xididdada. Ka dib 7 maalmood oo kale, tamaandhada waxaa loo tallaalaa galay xabado gaar ah oo sidaas koraan 3 toddobaad kale. Dabadeed dhererkuna si fiican ayey u qoyaan waxayna ku faafaan digsiga, ka hor intaan la mayrin cadaanka. Marka xigta, geedo waxaa lagu beddelaa habka hidroponic, adoo raacaya wakhtiyada (marka la xisaabinayo 0.9-1.2 m² qoyaan kasta).
Geedo daryeel, sida loo helo dalagyo hodan ah oo yaanyo ah
Sida hore u xusan, xalka ayaa si gaar ah muhiim u ah marka koritaanka dhirta ee habka hidroponic. Iyadoonay dhiman. Xoogaa, waxay u horseedaa gubasho oo xididdada, iyo daciif ah - si dhalidda hooseeyo. Sidaa darteed, si taxadar leh u xisaabi mugga bacriminta macdanta ee hidroponics ee yaanyada.
Marka dhirta ay koraan illaa 20 cm, waa in la xiro. Tani waxay khuseysaa xitaa noocyo fara badan, tan iyo markii aan ciidda dhirta laga saaro taageerada. Wixii samaynta iyo dhaqashada miraha, yaanyada ubaxyada waa in la pollinated (waxaad isticmaali kartaa burush). Fiiri xaaladaha heerkulka iyo iftiinka kor lagu sharaxay iyo goosashada qani ku ah ayaa laguu siiyaa.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada ka jirta habka korontada ee yaanyada sii kordhaya
Tiknoolojiyada Hydroponics ee yaanyada sii kordhaya waxay leedahay tiro ah faa'iidooyinka:
Isticmaalka baaxadda, biyaha iyo bacriminta.
Nafaqooyinka ayaa si buuxda loo dheefshiiday, halkii ay ku kala firdhin lahaayeen carrada.
Koritaanka dhirta waa mid deg deg ah marka loo eego kuwa koray habka caadiga ah.
Xakamaynta xakamaynta kobaca.
Kharashka shaqada oo yareeya (maaha waraabin, ha la dagaalamin haramaha, ha quudin).
Hagaajinta dhalidda iyo tayada miraha.
Sida caqabadaha, qiimaha bilowga ee qalabka iyo qalabka waa mid aad u sarreeya waana inaad barataa aragtida dhuumaha hidde-yaqaanka.
Waxaanu kuu soo bandhignay macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan hiddo-gaasta yaryar, sida loo go'aamiyo kala duwanaanta, qalabka, u samee xalka laydhka yaanyo, koraan geedo. Waxay u sheegayaan khibrada iyo khasaarooyinka habkan, iyo haddii ay qadarinayso halista, si ay u tijaabiso wax cusub ee beeritaanka yaanyada - go'aankaagu waa adiga. Waxaannu kuu rajaynaynaa kaliya wax-soosaarka sare.